စံ ro ရေကုသမှုစနစ် (HMJRO-2000LPH) - တရုတ် Xi'an Homey နည်းပညာ
Long ကဖိုင်ဘာ nonwoven Geotextile
တိုတောင်းသောဖိုင်ဘာ nonwoven geotextile
ပျော့ permeable ပြွန်
ပြောင်းပြန် Osmosis ရေကုသမှုစနစ်က
ငန် ro ရေကုသမှုစနစ်က
စွမ်းဆောင်ရည် 250LPH ထံမှ 50TPH ရန်ဖြစ်ပါသည်
စံ ro ရေကုသမှုစနစ်က
စံ ro ရေကုသမှုစနစ် (HMJRO-500LPH)
စံ ro ရေကုသမှုစနစ် (HMJRO-5000LPH)
စံ ro ရေကုသမှုစနစ် (HMJRO-2000LPH)
2000LPH ကို Reverse Osmosis သောက်သုံးရေသန့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစည်းတာဖြစ်ပါတယ်: 2000LPH စင်ကြယ်သော ro စနစ်အားအကျဉ်းညွှန်ကြားချက် demineralized ။ အဆိုပါရေပိုက်နှင့်ချည်စနစ်တကျတံဆိပ်ခတ်နေကြသည်။ ၎င်း၏အသေးစားအသံအတိုးအကျယ်လွယ်ကူသောလှုပျရှားမှု, installation နဲ့ maintanence အဘို့ဖြစ်၏။ device ကိုများအတွက်ပစ္စည်းများ 2000ppm အောက်ရှိရေ TDS နှင့်ကုသ ca ကိုနောကျ permeated ရေသန့်ရှင်းစေဘို့ရေကိုချေး problem.The system ကိုအသုံးပြုသည်ဖြေရှင်းဖို့ချေးယဉ်, အားဖြည့်ပလတ်စတစ်, နီကယ်-alumimum ကြေးဝါဖြစ်ကြသည် ...
Min.Order အရေအတွက်: 1 Piece / ပိုငျးပိုငျး
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 50 Piece / ပိုငျးပိုငျး
အရောင်: White က
အမျိုးအစား: pre-ကုသမှုမပါဘဲ ro အဓိက module တစ်ခု
အမြှေးပါး၏အဘယ်သူမျှမ: 4040 အမြှေးပါး 8 PC များ
ကားမောင်းမော်တာ: 380V 50HZ3အဆင့်
2000LPH demineralized စင်ကြယ်သော ro စနစ်က
2000LPH ကို Reverse Osmosis သောက်သုံးရေသန့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အဆိုပါရေပိုက်နှင့်ချည်စနစ်တကျတံဆိပ်ခတ်နေကြသည်။ ၎င်း၏အသေးစားအသံအတိုးအကျယ်လွယ်ကူသောလှုပျရှားမှု, installation နဲ့ maintanence အဘို့ဖြစ်၏။ device ကိုများအတွက်ကုန်ကြမ်းကိုတိုက်ရိုက်သောက်ရနိုင်ပါတယ်ကုသပြီးနောက် 2000ppm နှင့် permeated ရေအောက်ရှိရေ TDS သန့်ရှင်းစေဘို့ရေကိုချေး problem.The system ကိုအသုံးပြုသည်ဖြေရှင်းဖို့, ချေးယဉ်, အားဖြည့်ပလတ်စတစ်, နီကယ်-alumimum ကြေးဝါဖြစ်ကြသည်။
1, အဆိုပါကုန်ကြမ်းရေကိုထိပုတ်ပါရေသည်စည်ပင်သာယာရေပေးဝေရေး (TDS: ≤2000ppm)
ယင်းလိုအပ်ချက် (25 ° C) အရသိရသည် optional ကို: output ကိုလှမျးမိုးပြံ့နှံ့
ပင်လယ်ရေ input ကိုအပူချိန်:4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ 45 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
2, output ကိုအရည်အသွေးအလှမျးမိုးပြံ့နှံ့: အရက်သောက်စံကိုညွှန်ကြား WHO ကTDS≤600-700 ppm ။
3, ပါဝါထောက်ပံ့ရေး: 220V / 380V, 50 / 60Hz
* အသိုင်းအဝိုင်း, ကျောင်း, ဟိုတယ်, စက်ရုံအလုပ်ရုံစသည်တို့သည်နေ့စဉ်သောက်ရေ
ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များတွင်အသုံးပြုရေ * Desalination
အဖျော်ယမကာများတွင်အသုံးပြု * ရေ, အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းစသည်တို့ကို
အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ spec .:
HMJRO-2000LPH booster pump CHLF4-40 စီအဲန်ပီ 4m3 / ဇ, 32m
လင်းကျောက်သဲ filter ကို * 1650 450 HTCOMA FRP
F56D ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် RUNXIN
activated ကာဗွန် filter ကို * 1650 450 HTCOMA FRP
ပျော့ပြောင်း * 1650 450 HTCOMA FRP
F64D ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင် RUNXIN
အနည်အနှစ်များ filter ကို G1 "* 20" HENGXIN ကို ABS
မြင့်မားသောဖိအားစုပ်စက် CDL4-190 စီအဲန်ပီ 3.6m3 / ဇ, 160m
ro အမြှေးပါး BW30-400 DOW ထရီလီယံကုဗပေ
လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်စနစ်က Ro-2008 CREATE
ကရိယာတန်းဆာ ORGANIZATION မျက်မှန် YUYAO
ပိုက်လိုင်းများ အက်စ်အက်စ် / UPVC
Raw ရေစုပ်စက် + silica သဲ filter ကို + တက်ကြွကာဗွန် filter ကို + ပျော့ပြောင်း + မိုက်ခရွန် filter ကို + မြင့်မားသောဖိအားစုပ်စက် + ro စနစ်။
silica သဲ filter ကို / တက်ကြွကာဗွန် filter ကိုရန်ဖိအားပေး pump- 1. ကုန်ကြမ်းရေ
2. silica သဲ turbidity ဖယ်ရှားပစ်ရ filter-, ကိစ္စအော်ဂဲနစ်ဆိုင်းငံ့, colloid ဒါအပေါ်
3. Active ကိုကာဗွန် filter ကို-Remove အရောင် အခမဲ့ကလိုရိုက်, အော်ဂဲနစ်, အန္တရာယ်ရှိသောကိစ္စများနှင့်ဒါပေါ်မှာ
ရေ, ပျော့ပြောင်း-လျော့ချသည့်ခိုင်မာသော 4
4. Micron ကြီးမားသောအမှုန်များမဆိုအစစ်ခံ filter ကို-တားဆီး, အ ro အမြှေးပါးသို့ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်အများစုက The တိကျမှန်ကန်မှု, 5um ဖြစ်ပါသည် ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသံ, ဖုန်မှုန့်, ဆိုင်းငံ့ကိစ္စ, ညစ်ညူးအဖြစ်မဆိုကြီးမားသောမှုန်နောက်ကျောကိုကိုင်ပြီးအဘို့။
ro အမြှေးပါး (ကအနည်းဆုံး 2.0 MPA) ကိုမြင့်မားဖိအားပေး pump- 5. အမြင့်ဖိအား။
6. ro system ကို-ro စနစ်ကသန့်စင်သောရေကုသမှုစက်ရုံ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ro အမြှေးပါးရဲ့ desalt နှုန်းကို 99% အဖြစ်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနိုင်သည်, ကအိုင်းယွန်း, ဘက်တီးရီးယား, အမှုန်များနှင့်အော်ဂဲနစ်၏ 98% 99% ကျော်မဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်: စံ ro ရေကုသမှုစနစ် (HMJRO-1000LPH)
နောက်တစ်ခု: စံ ro ရေကုသမှုစနစ် (HMJRO-5000LPH)
ကို Reverse Osmosis ပစ္စည်း
ကို Reverse Osmosis အမြှေးပါး
ကို Reverse Osmosis ရေစက်
Ro System ကိုရေသန့်စက်ရုံ
ရေ ro Filter ကိုစနစ်
ရေကုသမှုစက်ရုံ Ro စနစ်
A-1402, Lvdi Soho No.6, Zhangba 1st လမ်း, High-Tech မှဇုန်, Xi'an, Shaanxi, တရုတ်
မိုဘိုင်း & ဘယ်အရာကို app ကို: + 86-15877553984
လျ & ဖက်စ်: + 86-029-6569-2269
E-mail ကို: info@homeytec.cn
Skype ကို: wendy_xingmiao